Maraoka: Fitsangatsanganana Iray, An-tsary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Aogositra 2017 8:37 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, 繁體中文, 简体中文, Português, Ελληνικά, Italiano, English
Manontania mpaka sary tsy anavahana.Tsy isalasalàna intsony fa i Maraoka no iray amin'ireo toerana faleha tena tsara jerena anaty sary indrindra eto an-tany. Ilay Aostraliana Moroccan Meanderings no iray amin'ireo blaogera nifidy ny hanolo ny soratra ho sary tamin'ity herinandro ity, milaza amintsika fa:
Koa satria nahazo fanehoankevitra tsara aho momba ireo sary ao amin'ity blaogy ity, heveriko ho ampiako sary vitsivitsy hafa manome topimaso an'i Maraoka izany:
Ilay sary eo ambony dia sarin'ireo Gorges du Dadès, (Tendan'i Dadès) ao Atsimo-Atsinanan'ny firenena. Saingy tsy ireo Gorges irery akory no mampihetsi-po! Omen'i Wakha antsika ny sary mahatalanjon'i Essaouira arahan'ny fehezanteny mifanaraka amin'izany:
“Avy ato anatiny sy avy any ivelany aho, sady faly no sosotra noho ny fiovaovana tsy manam-petran'ny fiainana.” -F. Scott Fitzgerald
Ny lanitr'i Maraoka no lohahevitra ankafizin'ireo mpakasary tahaka izay efa nasehonay. Mitatitra amintsika fiainana Maraokana amin'ny lafiny iray hafa ny The Morocco Report, amin'ity indray mitoraka ity, any Avaratry ny tanànan'i Meknes.
Fa tsy ny lanitr'i Maraoka ihany no mampitsiriritra – ireo zavakanto sasantsasany ihany koa dia mety hanana vokany toy izany, indrindra fa ireo karipetra Maraokana fanta-daza erantany. Asehon'i Mariam avy ao amin'ny My Marrakesh antsika ireo harena maroloko sasantsasany ao Maraoka:
Mitondra antsika any amin'ny Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, ny sary farany tamin'ity herinandron'ny 11 Jona 2007 ity. Nozarain'ilay blaogera Long Way Home tamintsika ireo sary sasantsasany mikasika ilay fetibe, izay tena nahitana kolontsaina marobe tokoa tamin'ity taona ity. Ny an'ilay tarika nanao hira gregoriana no tiako indrindra: